CustomWeather sy Bannister Lake dia niombon'antoka fiaraha-miasa hamoronana fahafaha-manao asa vaovao amin'ny alàlan'ny haino aman-jery nomerika | NAB Show News | 2020 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny Media sy ny mpamokatra ny Kat Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Featured » CustomWeather sy Bannister Lake dia niombon'antoka fiaraha-miasa hamoronana fahafaha-manao asa vaovao amin'ny alàlan'ny haino aman-jery nomerika
Ireo orinasa roa ireo dia hiara-hiasa amin'ny famolavolana sy ny vahaolana amin'ny tsena fampidirana ny vokatra Chameleon ao Bannister Lake sy ny angon-drakitra manokana momba ny toetr'andro an'ny CustomWeather
Bannister Lake sy CustomWeather dia nanambara androany fa niditra tao amin'ny fiaraha-miasa izy ireo mba hamorona fotoana iraisana amin'ny asa aman-draharaha sy ahafahan'ireo mpampiasa rindrambaiko Chameleon an'i Bannister Lake hampiditra ny angon-drakitra momba ny toetrandro avy amin'ny orinasan-toetrandro manam-pahaizana manokana, CustomWeather, Inc. ho an'ny toerana 85,000 manerantany amin'ny fiteny 95, manome vinavinan'ny vahaolana avo lenta avy amin'ny maodely efa voaporofo mialoha, ny CW100.
Ny vokatra Chameleon an'i Bannister Lake dia vahaolana fanangonam-baovao amin'ny fotoana tena izy ary vahaolana fitantanana ampiasaina mandritra ny indostrian'ny haino aman-jery nomerika hananana hery sy hametrahana modely sary. Ny vahaolana dia manosika ny mpitsikilo vaovao, ny valim-pifidianana, ny angon-drakitra ara-bola, ny filokana, ary ny fampiharana editorial hafa. Chameleon koa dia ampiasaina amin'ny fampiharana marika an-habakabaka, hifehezana sy hipetrahana snipe, bibikely, promos, ary tabilao "ho avy manaraka". Chameleon's RESTful API dia mamela ny tahirin-kevitra havaozina sy zaraina stratejika mba handefa maotera sary, toy ny HTML5, ary hampidirina amina rindranasa finday.
“Ny rindrambaiko ao Bannister Lake's Chameleon dia manolotra fomba vaovao hanitaranay ny fahafaha-mahazo antsika amin'ny tsena fanaovana haino aman-jery nomerika,” hoy i Geoff Flint, filoha sady CEO an'ny CustomWeather. “Ny vokatra tsara indrindra amin'ny toetr'andro miaraka amin'ny fahaizan'i Bannister Lake amin'ny fitantanana angona data any ho any sy ny fivoarana manokana dia manome lanja lehibe ho an'ny mpanjifany.”
“CustomWeather dia mpiara-miasa akaiky ho an'ny Bannister Lake. Ny angon-drakitra momba ny toetrandro dia loharanom-pahalalana lehibe ho an'ny tobin'ny mpanjifanay ary ny fahamarinan'ny CustomWeather sy ny isan-karazany ny vokatra angon-drakitra dia manome tolotra manintona ho an'ny tsena fampitana fampielezam-peo sy nomerika ”, hoy i Georg Hentsch, filoha, Bannister Lake.
Samy CustomWeather sy Bannister Lake dia samy hikely aina hanana fahafaham-po amin'ny fahaizana manokana amin'ny famoronana angon-drakitra tena izy sy vahaolana amin'ny rindrambaiko manokana. Amin'ny maha-manampahaizana manokana momba ny angon-drakitra manana fahaiza-mivoatra matanjaka amin'ny tahiry, API, ary ny fampiharana, ny endrik'i Bannister Lake,
manangana, ary mampiditra vahaolana izay mampiasa loharanom-pahalalana mifandraika amin'ny fanontana, toy ny CustomWeather, hisarihana ny mpihaino sy hisarihana ny fidiram-bolan'ny dokam-barotra.
Bannister Lake dia mpitarika Mpanome ny lahatsary matihanina sary Asehoy ny vahaolana ho an'ny fandaharana fahitalavitra, câble, zanabolana, rakipeo / sary, fampiharana fampisehoana fampahalalana, esports, ary takelaka nomerika manerantany. Ny vahaolana natolotry ny orinasa dia mifangaro amina fotodrafitrasa efa misy ary mandeha ho azy ny fampidirana sy fampisehoana loharanom-baovao ivelany, fanatsarana ny famokarana ataon'ny fikambanana rehetra. Tsidiho ny Bannister Lake amin'ny Internet ao amin'ny www.bannisterlake.com.
Previous: Bluefish444 dia manampy ny fanohanana KRONOS K8 ho an'ny Avid Media Composer sy Avid Pro Tools miaraka amin'ny Windows 2020.14.1 Install Package
Next: VUALTO dia mitazona fitomboana ao anatin'ny toe-javatra sarotra eo amin'ny tsena